Karazan-javamaniry Reef Resilience
Ny tontolo iainana an-dranomasina dia ahitana karazan-javamaniry, biby ary micro-organismes izay nivelatra tamin'ny fisorohana, nisaraka tamin'ny sakana voajanahary. Ny hetsika fitaterana olona toy ny fandefasana sy ny fitsangatsanganana an-dàlana dia namela ireo karazam-borona ireo hivoatra mihoatra ny faritra voajanahary ho any amin'ny faritra vaovao Ny karazana fanodinana dia voafaritra ho karazana tsy teratany (alien) ho an'ny tontolo voajanahary ary / na ny fampidiran-drindrina mahatonga azy, na mety hampisy fahasimbana ara-tsosialy, ara-toe-karena na tontolo iainana. Ny karazam-borona koa dia mety hanjary handratra raha toa ka manimba ny fanjanahantany ny tontolo iainana noho ny fahaverezan'ny fanaraha-maso voajanahary (izany hoe ny fahaverezan-tsakafo na ny herbivores).
Ny natiora any amin'ny ranon'ny tropikaly any Pasifika, ny lionfish dia heverina fa nampidirina tany amin'ny ranomasimbe Atlantika teo amin'ny morontsirak'i Floride tamin'ny tapaky ny 1990, ary nihanitatra haingana be manerana an'i Karaiba. Sary © Elaine Blum 2009 / Marine Photobank
Anisan'ny karazan-javamaniry misy karazan-javamaniry:
Valo amby valopolo isan-jaton'ny tontolo iainana an-dranomasina manerana izao tontolo izao dia efa misy fiantraikany amin'ny karazam-pandrosoana. ref Ireo vondrom-piarahamonina biolojika, toy ny ecosystems any Hawaii, dia mora kokoa amin'ny fampidirana ireo karazan'antoka.
Tsy ny karazana biby tsy teratany rehetra no hanjary hizara. Na dia miavaka be aza ny karazan-javamaniry misy karazan-javamaniry, dia misy karazana ankapobeny maromaro. ref Ny karazam-borona dia:
Ny fahafahana mampifanaraka sy miroborobo any amin'ny toeram-ponenana samihafa sy ny fepetra isan-karazany
Ny tahan'ny haingam-pivoarana eo amin'ny olona, ​​ka mahatonga azy ireo ho afaka manala zavamaniry na biby hafa
Ireo toetra mampiavaka azy ireo amin'ny toerana vaovao
Ireo toetra mampiavaka izay mamela ny fitomboan'ny mponina
Ny karazam-borona dia matetika afaka mametraka sy manatratra haingana ny tontolo vaovao. Izany dia satria ny mponina ao aminy dia tsy voatery hajaina amin'ny fizotry ny fomba voajanahary toy ny fanaraha-mason'ireo mpihaza, parasy, na aretina.
Ny lalan'ny fampidiran-tsiran-javaboahary an-dranomasina
Ny karazam-pitaovana dia azo ampidirina amin'ny tontolo iainana an-dranomasina maro: ref
Fandevenana ara-barotra - Fanatobiana entana, sambo mpanjono, fanimbana
Rano misy rano: Seewater izay ampiasaina hampihenana ny sambo. Raha tsy misy entana ny sambo iray, dia feno rano izy mba hampitomboana izany. Rehefa misy entana, dia levona ny fiaramanidina ballast. Ny rano voavaky ao amin'ny seranana iray (miaraka amin'ireo karazam-borona ao anatiny) dia azo alefa any amin'ny seranana hafa (fanalana ireo karazana ho tontolo vaovao). Ny sasany amin'ireo karazana ireo dia lasa mitaona. ref
Vatom-borona: Ny vatany iray dia ny fanaka ny sambo iray, izay manome toerana iray izay mipetraka sy mipetraka. Rehefa mihetsiketsika ireo sambo, dia entina mankany aminà faritra hafa amin'izao tontolo izao ireo karazana ireo. Izany dia mihatra amin'ny sambo rehetra, anisan'izany ny sambo, sambo sambo sy fanaka fanjonoana. ref
Mitazona sy manamboatra lavadrano (fanangonam-bokatra hitazonana ireo trondro velona amin'ny sambo)
Fitaovam-piadiana sy korontana
Fialamboly ara-javakanto - Manimba sy manimba amin'ny alàlan'ny zavatra hafa (ohatra, motera ivelany, lavadrano mivantana, rindran-drano)
Aquaculture, aquarium, zaridaina
Famoahana tsy ara-dalàna ny vondron'olona kinendry avy amin'ny tranom-piasana amin'ny kolontsaina / fampiroboroboana (karazana sasany dia ampidirina an-tsakany ho amin'ny sakafo ho an'ny sakafo ary avy eo miditra ao anaty ala ka manorina)
Famoahana tsy misy idiran'ny zavamananaina
Fanafahana azo avy amin'ny zavamananaina (matetika amin'ny mpanjifa na mpankafy)
Fandaharanasam-panjakana sy fikarohana - Famotsorana nomena (biocontrol) ary famotsorana tsy nahazoan-dalana / tsy nekena
Fandevenana mivelona an-dranomasina (ohatra, ny fivarotana mpivarotra Live Reef Fianakaviana - karazana an-dranomasina tsy misy teratany azo novidina sy niniana natao na navotsotra tany amin'ny rano teo an-toerana)
Famotsorana ireo fomban-kolontsaina
Fanafarana tsy ara-dalàna na tsy fahita firy
Maranitra - Fikambanana mifindrafindra any amin'ny harato sy havoana nandao
Ny karazam-borona dia heverina ho iray amin'ireo loza lehibe indrindra amin'ny fiarahamonintsika an-dranomasina. Ireo mpanafika an-dranomasina dia nisy fiantraikany manan-danja teo amin'ny sehatra iainana, tontolo iainana, fisaka, ary mariculture, ny fahasalamana, ny fampandrosoana indostria ary ny foto-drafitrasa
Ny fiovan'ny toetrandro dia mety hampitombo ny fielezan'ny karazana an-dranomasina mitam-piadiana. Ohatra, ny fiovaovan'ny toetr'andro dia mety hiteraka fiovan'ny fitateram-bahoaka (sehatra fitaterana lava kokoa, lalana vaovao), fiovan'ny fikorontanan'ny toetr'andro izay manandratra ny karazan-karazan-javamaniry na mampitombo ny mety hitrangany, ary ny fanovan'ny karazam-bolo (ohatra: amin'ny fitomboan'ny hafanana). ref Ny fiovaovan'ny toetr'andro ho setrin'ny fitomboan'ny hafanana dia azo antoka fa ny fandalinana dia nanapa-kevitra fa ny sasany amin'ireo mpanafika dia manana fahaizana ambony kokoa mba handefitra ny toetr'andro mitombo kokoa raha oharina amin'ny karazana teratany. ref Ity fahafaha-manazava ity dia mety manazava amin'ny ampahany hoe nahoana no mihamitombo ny isan'ireo fipoahana vaovao.
Fitantanana karazan-javamaniry dia mety ho fanamby lehibe. Ny fisorohana no fomba tena mahomby indrindra ho an'ny mpitantana, satria ny karazam-panafody indraindray dia miorina amin'ny tontolo voajanahary an-dranomasina, mety tsy ho vita mihitsy ny hanafoanana azy ireo. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIUCN - Fandrahonana an-dranomasina - Karazan-javamaniry manafika vahiny amin'ny tontolo iainana an-dranomasinamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIUCN: momba ny karazam-borona an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEPA - Karazana trondro tsy manan-janaka
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMuseum Museum - Karazan'olona vahiny any Hawaii
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-làlana & Fitaovana momba ny karazan-java-manafika manerantany
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoKaua'i Komitin'ny karazam-borona
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Institiota nasionaly vaovao ao New Zealand momba ny rano sy ny atmosfera - Fivoarana ny zavamaniry sy ny biôzôra voajanahary
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoANGOVO NOAA Faritra Andrefana - Karazan-javamaniry mitaona
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFoibe nasionalin'ny NOAA ho an'ny Siansa momba ny Ranomasim-pasika - Karazan-javamaniry
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoUSDA - Ivotoerana momba ny karazam-biby nasionaly